Vokatry ny Fanahy: Hatsaram-panahy
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Novambra 2018
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Altaï Alur Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Efik Esan Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
EFA nisy olona tsara fanahy taminao ve? Faly erỳ angamba ianao tamin’izay, satria nahatsiaro hoe misy miraharaha. Tiantsika rehetra rehefa tsara fanahy amintsika ny olona. Ary isika? Inona no hanampy antsika hanana an’io toetra tena tsara io?
Ny hoe tsara fanahy dia tsy midika hoe miseho ho mahalala fomba. Tena mitady izay hahasoa ny hafa ny olona tsara fanahy, ary mampiseho an’izany amin’ny teniny sy ny ataony. Manao zavatra ho an’ny hafa izy, satria tena tia azy ireo ary miombom-pihetseham-po aminy. Vokatry ny fanahin’Andriamanitra ny hatsaram-panahy, ka tsy maintsy miezaka hanana an’io toetra io isika. (Gal. 5:22, 23) Hojerentsika àry izao ny modely omen’i Jehovah sy Jesosy. Hodinihintsika koa izay azontsika atao mba hanahafana azy ireo.
I JEHOVAH NO TENA TSARA FANAHY
Tsara fanahy amin’ny rehetra i Jehovah, na dia amin’ny olona “tsy mankasitraka” sy “ratsy fanahy” aza. (Lioka 6:35) “Mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy”, ohatra, izy “ary mandatsaka ny orana amin’ny marina sy ny tsy marina.” (Mat. 5:45) Na dia ny olona tsy mino aza hoe i Jehovah no Mpamorona, dia omeny an’izay ilaina mba hahavelona azy ireo. Afaka ny ho falifaly ry zareo amin’izay.
Eritrereto izay nataon’i Jehovah ho an’i Adama sy Eva. “Nanjaitra ravin’aviavy” izy ireo rehefa avy nanota, dia “nataony sikina.” Fantatr’i Jehovah anefa hoe nila akanjo mety tsara izy mivady, satria hipetraka any ivelan’ny zaridainan’i Edena. Efa voaozona mantsy ny tany tamin’izay, dia feno “tsilo sy ahidratsy.” Tena tsara fanahy àry i Jehovah, ka nanamboarany “akanjo lava vita tamin’ny hoditra” i Adama sy Eva.—Gen. 3:7, 17, 18, 21.
Ny mpanompony tsy mivadika anefa no tena ampisehoan’i Jehovah hoe tsara fanahy izy. Jereo, ohatra, ny nataony ho an’ny anjely iray tamin’ny andron’i Zakaria mpaminany. Nalahelo ilay anjely satria tsy nanorina ny tempolin’i Jerosalema intsony ny olona. Nihaino tsara an’izay nolazainy i Jehovah, dia avy eo nilaza “teny mahafinaritra sy mampionona” taminy. (Zak. 1:12, 13) Tsara fanahy tamin’i Elia mpaminany koa i Jehovah. Kivy be i Elia indray mandeha, dia nangataka an’i Jehovah mba hamono azy. Tsy niraharaha ny fihetseham-pony ve i Jehovah? Tsy izany mihitsy! Nandefa anjely aza izy mba hampahery azy. Nomeny toky koa i Elia hoe tsy irery izy. Lasa nahavita ny asa nasaina nataony izy taorian’izay. (1 Mpanj. 19:1-18) Iza no tsara fanahy indrindra hoatran’i Jehovah amin’ny mpanompony rehetra?
TSARA FANAHY BE KOA I JESOSY
Nalaza ho tsara fanahy i Jesosy. Tsy mba nasiaka na tia nibaikobaiko izy. Nalahelo izy nahita olona nijaly, dia nilaza hoe: “Mankanesa atỳ amiko ianareo rehetra miasa mafy sy mavesatra entana, fa hamelombelona anareo aho. ... Mora entina ny ziogako.” (Mat. 11:28-30) Narahin’ny olona hatraiza hatraiza izy satria tsara fanahy. “Nangoraka” an-dry zareo izy, dia nanome sakafo an-dry zareo ary nanasitrana an’izay narary sy kilemaina. Nampianariny “zavatra maro” momba ny Rainy koa izy ireo.—Mar. 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.
Nahazo tsara ny tany am-pon’ny olona koa i Jesosy, ary hita tamin’ny fomba nitondrany azy ireo izany. ‘Noraisiny tsara’ izay rehetra tena nitady azy, na dia mety ho nanahirana azy aza izany. (Lioka 9:10, 11) Te ho sitrana, ohatra, ny vehivavy iray nandeha ra dia nikitika ny akanjon’i Jesosy. Tsy azony natao anefa izany satria naloto izy raha araka ny Lalàna. (Lev. 15:25-28) Natahotra be izy, nefa tsy nibedy azy i Jesosy fa nangoraka azy. Efa 12 taona mantsy izy no narary. Hoy i Jesosy: “Ny finoanao no nahasitrana anao, anaka. Mirary soa ho anao aho, ary ho sitrana amin’iny aretina nampijaly anao iny anie ianao!” (Mar. 5:25-34) Tsy hitanao hoe tsara fanahy be ve i Jesosy?
MANAMPY NY HAFA NY OLONA TSARA FANAHY
Hitantsika teo hoe aseho amin’ny atao ny hatsaram-panahy. Nanamafy an’izany i Jesosy tao amin’ny fanoharana iray. Noresahiny tamin’izay hoe nendahan’ny jiolahy ny Jiosy iray, dia nokapohin-dry zareo ary efa saika maty vao navelany. Nalahelo azy ny Samaritanina iray. Tsara fanahy izy ka nanao zavatra hanampiana azy. Nokarakarainy ny ratran’ilay Jiosy, dia nentiny tany amin’ny tranombahiny izy. Nomeny vola koa ny tompon’ilay tranombahiny mba ho voakarakara tsara ilay Jiosy. Niteny mihitsy aza izy hoe izy no hiantoka raha misy zavatra hafa hilaina. Nifankahala anefa ny Jiosy sy ny Samaritanina tamin’izany.—Lioka 10:29-37.
Milaza teny mampahery koa ny olona tsara fanahy, ary hita amin’izay lazainy hoe mihevitra ny fihetseham-pon’ny hafa izy. Hoy ny Baiboly: “Ny tebiteby ao am-pon’ny olona no mahakivy ny fony, fa ny teny soa kosa no mahafaly ny fony.” (Ohab. 12:25) Hamelombelona ny hafa isika raha tsara fanahy sy tsara toetra, ka miresaka zavatra mampahery. * Ho hita amin’izay lazaintsika hoe tia azy ireo isika. Hahazo hery izy ireo amin’izay, dia ho mora kokoa aminy ny hiatrika an’izay mahazo azy.—Ohab. 16:24.
INONA NO HANAMPY ANTSIKA HO TSARA FANAHY?
Afaka ny ho tsara fanahy ny olona rehetra, satria natao ‘araka ny endrik’Andriamanitra.’ (Gen. 1:27) Tsara fanahy tamin’ny apostoly Paoly, ohatra, ilay manamboninahitra romanina atao hoe Jolio. Izy no nasaina nitondra an’i Paoly ho any Roma. ‘Navelany ho any amin’ny namany sy hokarakarain’izy ireo i Paoly’, tamin-dry zareo tany Sidona. (Asa. 27:3) Tsara fanahy tamin’i Paoly sy ny olon-kafa koa ny mponina tao Malta, tamin-dry zareo vaky sambo. Nandrehitra afo mihitsy aza ry zareo mba ho afaka hitanina afo ry Paoly. (Asa. 28:1, 2) Tena tsara ny nataon’ireo olona ireo. Ny hoe tsara fanahy anefa tsy midika hoe manao zavatra tsara indray mandeha fotsiny.
Tokony ho tsara fanahy foana isika. Tokony hataontsika fomba fiaina mihitsy izany. Amin’izay isika vao tena hampifaly an’i Jehovah. Izany no mahatonga azy hampirisika antsika mba ‘hitafy’ hatsaram-panahy. (Kol. 3:12) Sarotra anefa izany indraindray satria menatra isika, na tsy matoky tena, na somary tia tena. Tsy mora koa ny hoe ho tsara fanahy amin’ny olona ratsy toetra amintsika. Hahavita handresy an’ireo anefa isika ka ho tsara fanahy, raha mangataka fanahy masina sy maka tahaka an’izay ataon’i Jehovah.—1 Kor. 2:12.
Eritrereto izay azonao atao mba ho tsara fanahy kokoa. Diniho ireto: ‘Rehefa misy olona miresaka amiko, dia mihaino tsara ve aho sady miezaka hahazo ny fihetseham-pony? Tonga dia manao zavatra ve aho rehefa fantatro hoe misy ilain’ny olona? Tsara fanahy amin’ny olona tsy fianakaviako na tsy namako ve aho? Oviana aho izao no nanao an’izany farany?’ Miezaha koa hanana tanjona, ohatra hoe hahafantatra bebe kokoa ny olona manodidina anao, indrindra fa ny ao amin’ny fiangonana. Ho fantatrao amin’izay izay manjo azy sy izay ilainy. Mila miezaka ho tsara fanahy ianao avy eo, ka izay tianao hataon’ny olona aminao no ataovy aminy koa. (Mat. 7:12) Mangataha koa fanampiana amin’i Jehovah, dia hotahiny ny ezaka ataonao.—Lioka 11:13.
TIAN’NY OLONA IZAY TSARA FANAHY
Nitanisa toetra maromaro nanampy azy hahavita tsara ny fanompoany i Paoly, ary anisan’izany ny “hatsaram-panahy.” (2 Kor. 6:3-6) Tian’ny olona izy satria tena nitady izay hahasoa an-dry zareo. Hita tamin’izay nolazainy sy nataony izany. (Asa. 28:30, 31) Mety ho liana amin’ny fahamarinana koa ny olona raha tsara fanahy aminy isika. Mila miezaka ho tsara fanahy amin’ny rehetra àry isika, na dia amin’ny olona manohitra aza. Mety hanohina ny fony mantsy izany, dia hiova izy. (Rom. 12:20) Mety hihaino ny hafatra avy ao amin’ny Baiboly mihitsy izy any aoriana any.
Ho tsara fanahy daholo ny olona ao amin’ny Paradisa. Sambany angamba ny sasany amin’ireo hatsangana amin’ny maty vao hahita hoe hoatran’ny ahoana izany hoe misy tsara fanahy aminy izany. Tena ho tian-dry zareo izany, ka hiezaka hanana an’io toetra io koa ry zareo. Tsy havelan’i Jehovah hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa izay ratsy fanahy sy tsy mety manampy olona. Ny olona be fitiavana sy tsara fanahy ihany no havelany hiaina mandrakizay. (Sal. 37:9-11) Hiadana ny rehetra amin’izany ary hilamina ny fiainana. Na amin’izao aza anefa isika dia efa handray soa raha tsara fanahy.
MISY VOKANY TSARA NY HATSARAM-PANAHY
Hoy ny Baiboly: “Manao soa amin’ny tenany ny olona tsara fanahy.” (Ohab. 11:17) Mamy hoditra ny olona tsara fanahy, ary matetika no tsara fanahy aminy koa ny olona. Hoy i Jesosy: “Araka izay famarana ampiasainareo no hamarana ho anareo.” (Lioka 6:38) Mora mahazo namana àry ny olona tsara fanahy, sady mpinamana foana ry zareo.
Nampirisika ny Kristianina tany Efesosy i Paoly hoe: ‘Aoka ianareo ho tsara fanahy amin’ny namanareo avy, ka hangoraka sy hifamela heloka tanteraka.’ (Efes. 4:32) Tena mandray soa ny fiangonana rehefa samy miezaka ho tsara fanahy sy hangoraka ary hifanampy ny olona ao. Tsy milaza teny masiaka na tia manakiana ry zareo, sady tsy manao vazivazy maneso sy mandratra fo. Miezaka hilaza teny mampahery ry zareo fa tsy mifosafosa. (Ohab. 12:18) Matanjaka ilay fiangonana vokatr’izany, ary falifaly manompo an’i Jehovah.
Aseho amin’ny teny sy ny atao àry ny hatsaram-panahy. Manahaka an’ilay Andriamanitra be fitiavana isika rehefa manao an’izany. (Efes. 5:1) Hanampy ny fiangonana mba hatanjaka isika amin’izay, sady hampirisika ny olona hanompo an’i Jehovah. Andao àry isika samy hiezaka, amin’izay ho hitan’ny olona fa tena tsara fanahy ny Vavolombelon’i Jehovah!
^ feh. 13 Mbola horesahina ao amin’ity andian-dahatsoratra ity ny hoe hatsaran-toetra, any aoriana any.
“Vidio ny Fahamarinana ka Aza Amidy”
“Handeha Amin’ny Fahamarinanao Aho”
Matokia An’i Jehovah dia Hiaina Mandrakizay Ianao!
Ny Hevitr’iza no Arahinao?
Miezaka Hitovy Hevitra Amin’i Jehovah ve Ianao?
Inona no Azontsika Omena An’i Jehovah?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Novambra 2018
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Novambra 2018
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Novambra 2018